Admaasuu Biraanuu - Wikipedia
Admaasuu Biraanuu (1956 - Gurraandhala 14, 2015) taatoo fi nama baacoo adda addaa tabatu yoo ta'u guddina aartii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaba. Artisti Admaasun baayyinaan hojiisaa kan Afaan Oromootin haa beekkamu malee, hojiiwwan Amaariffaan hojjates ni qaba.
Admaasuun godina Wallagga Dhihaa Biilaa gaanda Qumbii jedhamutti bara 1956tti dhalate. Yeroo ijoollummaa isaa magaalaa Asoosaatti galuun bakka Kumruk jedhamutti abbaasaa kan daldalaa ture biratti guddatee. Yeroo gabaabaf magaalaa Jimmaa adaadaasaa bira jiraateera. Yeroo umuriinsaa 13 gara Finfinneetti godaane.
Admaasun barnootaasaa adaadaasaa bira gara Jimmaa deemee achitti barate. Barnootasaa sadarkaa lammaffaa ammoo Finfinnee Addis Katamaatti hanga kutaa 7tti erga baratee booda hojii aartii itti fufuuf addaan kute. Boodarra guyyaa hojjachaa galagala barachuun barnoota sadarnaa lammaffaa mure.
Admaasun hojii aartii walakkeessa 1970nii keessa mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka weellisuuf qacarame. Boodarra tiraampeetii baratee sana tabachuudhaan, sagaleen wellisuudhaan, ragada aadaa Oromoo ragaduudhaan hojjata ture. Kana malees sirbaa fi walaloo adda addaa ni barreessaa ture. Walleewwan jaalatamoo inni mana tiyaatira bulchiinsa magaalaa Finfinneetti weellise keessaa “Yaa Turungoo” fi “Biqiltuu Ganamaa” ti.
Admaasuu Biraanuu manneen tiyaatiraa biyyattii keessa jiran gurguddaa kan akka Haagar Fiqir, Raas Tiyaatir, fi Beeraawwii keessatti hojjateera. Tiyaatiroota Amaariffaan hojjate gurguddaa keessaa Abugidaa Qayiso, Tewoodroos, Simmanyi Sintayehu, Balchaa Abbaa Nabsoo, Ya Veenus Nagaaddee, Isaat Sinaddi, Mali’ikta Wozadar, Maqidim fi Ya Qossaluu Mishigooch isaan muraasa. 
Adaamsun walaloo sirbaa barreessunis ni beekkama. Namoota inni walaloo sirbaa kenneef keessa muraasni Saahilee Dagaagoo, Sayyoo Dandanaa, Daagim Makonnin, Hirphaa Gaanfuree, Asteer Abdii fi as dhihooti ammoo Haabtaamu Lamuu faadha.
Booda ammoo diraamaalee Oromoo adda addaa beekamoo ta’an keessumaa kan jalqaba 1990mootaa keessa baay’ee jaalatamaa ture Qophii Dhangaa irratti achiimmoo diraamaalee baacoo akka qaanqee, diraamaa dhiyeenya agarsiisamaa ture kan dheebuu jedhu keessattis qooda guguddaa fudhachuudhaan daawwattoota biratti nama jaal’atama guddaa qabu ture.
↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 REMEMBERING ARTIST ADMASU BIRHANU MAGARSA, dhihootti kana baname: Gurraandhala 22, 2016
↑ Artistiin Oromoo Admaasuu Birhaanuu Du’aan Boqote, dhihootti kana baname: Gurraandhale 22, 2016
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Admaasuu_Biraanuu&oldid=28590" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 27 Guraandhala 2016, sa'aa 07:36 irratti.